Soosaarka hawada Carbon ee Shiinaha Soosaarka iyo Warshad | Yan Tuo
Qalabka hawada ee kaarboonka
Waqtiga hawlgalka sicir bararka oo gaaban: Waxay qaadataa oo kaliya 3 ilbidhiqsi si loo kala saaro oo loo dhigo usheeda dhexe ee la buufin karo iyo tubada xaashiyaha si loo dhamaystiro sicir bararka iyo hoos u dhaca Uma baahnid inaad kala furfurto qaybo ka mid ah dhamaadka usheeda dhexe si aad si adag ula falgasho tuubada xaashida ah.
Aluminium, Fiber Kaarboon
Dhammaan Noocyada Mashiinnada Dabaysha iyo Kala Bixinta
1200 * 75 * 59 / Sida loo baahdo
Bandhig sawir faahfaahsan
Mabda'a shaqada: Iyadoo la sii ballaarinayo hal barkinta shilka, furaha ayaa sii ballaaranaya, xudunta usheeda dhexe waa la qabsan doonaa.
Faa'iidooyinka: 1. Nidaamkiisa gaarka ah ee loo yaqaan 'clip-on system' awgeed, barkinta shilka ayaa si fudud loo beddeli karaa ka dib marka madaxa usheeda dhexe la soo baxo, iyada oo aan loo baahnayn qalab gaar ah.
2. Miisaanka mashiinka la buufin karo ee fiiq-fiiqan ayaa ah 1/3 kaliya ee fallaarta dhaqameed, taas oo aad ugu habboon culeyska culus iyo maaraynta gacanta ee rarka iyo dejinta. Waxay yareyn kartaa dhaawaca shaqada ee hawlwadeenada ku jira maaraynta, waxayna sidoo kale hagaajin kartaa waxtarka shaqada.
3. Qaab-dhismeedka gudaha waxaa loo qaabeeyey si uusan u soo saarin dhaqdhaqaaq rabshadeed oo ka socda qaybta xawaaraha sare leh.
4. Awood sare. Si ballaaran loogu dabaqi karo baahiyaha dalabyada kala duwan
5. Daaweynta dusha sare ee gaarka ah waxaa loo isticmaali karaa deegaanno kala duwan oo gaar ah (boodh la'aan, daxal, jawiga heerkulka sare).
Isticmaala: Ku habboon fallaadhihii dib loo celin karo ee dahaadhka, jeexitaanka, daabacaadda, dib u celinta, laminating, sameynta waraaqaha, sameynta bacda, caagagga iyo mashiinnada kale ee la xiriira, oo si wax ku ool ah u hagaajin kara waxtarka shaqada.
Mashiinka balaadhinta hawadu waa hawo qaas ah, usheeda balaadhinta, usheeda balaadhinta, rullaluistemadka la buufin karo, usheeda dhexe la buufin karo, usheeda dhexe cadaadiska iyo wixii la mid ah. Mashiinka la buufin karo iyo shaarka la buufin karo ayaa aad ugu habboon in la isticmaalo.
1. Waqtiga hawlgalka sicir bararka oo kooban: Waxay qaadataa oo kaliya 3 ilbidhiqsi in lakala saaro oo la dhigo godka la buufin karo iyo tubada xaashiyaha si loo dhamaystiro sicir bararka iyo sicir bararka. Uma baahnid inaad kala furfurto qaybo ka mid ah dhamaadka usheeda dhexe si aad si adag ula falgasho tuubada xaashida ah.
2. Tuubbada xaashida ah way fududahay in la dhigo: tubbada xaashiyaha waa la dhaqaajin karaa laguna hagaajin karaa meel kasta oo ku yaal dusha sare ee usheeda dhexe iyada oo la adeegsanayo ficil bararka iyo rogidda.
3. Culays culus oo xamuul ah: Dhexdhexaadiyaha usheeda dhexe waxaa lagu go'aamin karaa iyadoo loo eegayo baahida dhabta ah ee macaamiisha, iyo bir adag oo adag ayaa loo isticmaalaa in lagu kordhiyo culeyska xamuulka qaada.
4. Waxtarka dhaqaale ee sarreeya: Mashiinka waxaa loogu talagalay inuu yahay hawl gaar ah, oo loo isticmaali karo dhammaan noocyada dhuumaha dhumucda, dhuuban, ballaaran iyo cidhiidhiga ah.
5. Dayactir fudud iyo waqti dheer oo la isticmaalo: In kasta oo wiishka la buufin karo uu yahay qalab farsamo, qayb kasta oo qaabkeeda u gaar ah waxay leedahay qeexitaan go'an oo waa la isticmaali karaa iyadoo la is weydaarsan karo, taas oo sahleysa in la ilaaliyo.
Waxaa jira 1 inch, 1.5 inch, 2 inch, 2.5 inch, 3 inch, 6 inch, 8 inch, 10 inch, 12 inch, gacmo ballaarin hawo, iwm., Iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha, qeexitaano kala duwan oo ka mid ah usheeda dhexe balaarinta hawada ayaa laga shaqeyn karaa lana soo saaray.
Mashiinka balaadhinta hawadu wuxuu leeyahay adeegsiyo kaladuwan: mashiin kasta oo leh dib u laabid, furid iyo jeexitaan ayaa loo isticmaali karaa fallaadhaha balaadhinta hawada.
Ku habboon qalabka daabacaadda: Mashiinka wax-soo-saarka, mashiinka daabacaadda flexo, mashiinka jajabka, mashiinka daabacaadda sumcadda iyo wixii la mid ah.
Ku habboon qalabka kale ee farsamada: Mashiinka wax lagu duubo, mashiinka maqaarka, mashiinka dejinta, mashiinka wax lagu qoro, mashiinka jeexjeexa, mashiinka goynta dhinta, mashiinka duubista warqada, mashiinka laminating, mashiinka laminating, Mashiinka afuufa Filimka, mashiinka xumbada, mashiinka laminating, mashiinka dhoobada, mashiinka warqada. , Mashiinka aan tolmo wanaagsan lahayn, mashiinka baarista dharka, mashiinka ku dhufashada kulul, qalabka batteriga iyo mashiinnada kale ee la xiriira ee taageeraya isticmaalka.
Xiga: Xaraashka taarikada liisanka kaarboon kaarboon